Nzira yekuvaka sei zvakanakisisa backlinks?
Mumazuva edu, vashandisi vebhuku vanomanikidzwa kurwisana nematunhu ekutsvaga pakutsvaga peji peji sezvo peji yemakwikwi yakakwirira chaizvo. Kuti ionekwe pakati pezvivako zvakasiyana-siyana zvakasangana, unoda kugadzira kukunda kwekugadzirisa nekugadzira unhu hunoenderana. Sezvo nguva yekupedzisira yeGoogle rankings update, yakava zvishoma zvakaoma kuvaka zvikwata zvewebsite yako. Mazuva ano, Google inonyatsoongorora hutano hwehukama huripo, hunokoshesa iyo chete backlinks inobva kune mazita ehutori. Ndicho chikonzero vese webmasters webhutarisiro anotarisa anofanirwa kunge achiziva kuti ingagadzira sei backlinks kuti ibudirire zvakanakisisa. Muchikamu chino, tichakurukura nzira dzakagadzirisa dzekuwana zvikwereti zvakakosha zvemashure uye zvinhu zvinogona kukubatsira kuti uwedzere nhamba yemasangano anouya.
Nzira dzekuwana zvikwereti zvakakosha zvemashure
Backlinks kubva kune dzimwe nzvimbo dzepamusoro dzewebhu
chikonzero chinogadzirisa unhu hwehukama hunopinda hune simba rezvinhu izvo zvinobatanidzwa izvi zviri kuuya. Nemuenzaniso, kana iwe une zvishoma zvishoma backlinks kubva kumusoro kwepamusoro webhutori dzemhepo vachakuunza mamwe mawaniro ejusi uye mazamu akawanda akawandisa kubva kumahofisi akakurumbira. Inogona kutsanangurwa neGoogle kuziva nezvehutano hwehuwandu kana hutsva hunoputika kubva munzvimbo dzakakurumbira. Kunze kwezvo, zvikamu zviviri zveGoogle zvinotarisa hutano hwehutapi hwehutori - Page Authority uye Domain Authority. Kana iwe webhupu inobata maPA ematunhu makuru, Google ichaiisa yakakwirira pamusoro peSERP, ichichiwedzera kuvimba. Kana zvikwangwani zvako zvisingaoneki zvikaonekwa pamhando iyi yemasiti, zvichaunza huwandu hwehutano hwemashoko pamapeji ako ewebhu. Kuti uone kana zvikwata zvako zviri panzvimbo yepamusoro yehutori hwehutori kana kwete, unogona kushandisa Semalt Web Analyzer thuluzi.
Backlinks kubva pamapuraneti emuPR
PageRank (PR) inoshanda sechiratidzo chekuongorora nzvimbo yewebhu yega yega kutsvaga injini yakaratidzwa neGoogle. Nzvimbo dzakasarudzwa paTAT dzine zvishoma 9PR uye dzine zvakawanda zvehutano kune vashandisi. Kubva muna 2012 PageRank haisi yakakosha sezvayakanga yamboitika, asi ichiri kushanda semuenzaniso wekuongorora unhu hwehuwandu hwewebhu uye mukurumbira wayo mumaziso evashandisi nevashandi vemabhizimisi. Nokusingaperi, backlinks kubva kune dzimwe 9 kana 10PR websites yakadai se Wikipedia, YouTube, Facebook, nezvimwe zvakadaro, zvinogona kuuya nehuwandu hwehutano hwemashizha pamapeji ako epaiti. Zvisinei, hazvisi nyore nguva dzose kuwana mabhizimisi anouya kubva kune rudzi urwu rwewebhu. Zvisinei, kune dzimwe nzira dzinonyangadza dzaunogona kuita (unogona kuverenga pamusoro padzo munyaya yedu yapfuura "Nzira Yokuwana Sei Nhamba Yekuita Nechekutevera Inonzi Backlinks For Free?"). Ndinokukurudzira kuti urege kuparadza nguva yako paunenge uchiedza kuumba mazano kune itsva N / A PR mawebhusayithi kana kuti kwete pane yako niche pasi PR sites. Iwe haugoni kuwana mhinduro dzakanaka kubva kwazviri uye kunyange kukwidza Google wariness kuenda kunharaunda yako.
Backlinks kubva pamapeji akafanana
Kana usingakwanisi kuvaka mashizha ako kumawebsite akakwirira eP PR, unoda kunge uchida kuumba panzvimbo dzinoenderana niche dzine zvimwe zvakafanana musoro. Somuenzaniso, kana bhurogi rako riri pamusoro pekutsvaga injini, hutano hwako pamaklogi ekutengesa huchaita zvakasikwa. Kunyangwe kana bhuku rine bhokisi riri pakati, mamangwana ako achaongororwa seakakosha uye unhu. Ndicho chikonzero usati watanga ukama hwehukama nedzimwe mawebhusayithi kana mabloggi, iva nechokwadi chokuti zvishoma zvishoma zvinotarisa kumhizha yako Source .